I-Queen of High Schools yenze enye yezinhlelo zayo | Eyethu News
I-Queen of High Schools yenze enye yezinhlelo zayo
Bajabulise izingane ezingenabazaliepaki.
USiyathokoza Zulu oyi-Queen of High Schools, Sthembile Nxumalo onguMsunguli weYonwaba Nathi Projects and Promotions ne Queen of High Schools, noGugu Madubela oyi 1st Princess yeQueen of High Schools epaki yase Oslo Beach izolo bezojabulisa izingane zase Port Shepstone Child Welfare.
USIYATHOKOZA Zulu (oyi Queen of High Schools 2014) no Gugu Madubela (oyi 1st Princess) bameme izingane ezingenabazali ezihlala ePort Shepstone Child Welfare ukuba zizojabula kanye nabo epaki yase Oslo Beach izolo.
Lokhu kungenye yemisebenzi lezi zintokazi ekumele ziyenze njengoba baphuma phambili kumncintiswano we-Queen of High Schools. USthembile Nxumalo ongumsunguli weYonwana Nathi Projects and Promotions ne Queen of High Schools uchaze lomncintiswano njengento yokusiza umphakathi nokuvela nemibono yokusiza abantu.
“IQueen of High Schools akuwona nje umncintiswano wonobuhle kuphela kodwa eyokufundisa amantombazane amancane nokubuyisela emphakathini ukuze kusizakale ebaswele,” kuchaza Sthembile Nxumalo.
Abakwa Child Welfare bebefike nezingane ezibalelwa ku-30 eziyizintandane. “Iningi lalezi zingane ziyizintandane, kanti sisazama ukuthola ezinye eziningi izingane esizohlala nazo,” kusho uBusisiwe Mdunjane ongu Sonhlala kahle.
Lokhu kongenye yezinhlelo abakwa welfare abazenzayo njalo ngama holidi nangama easter ukuthi bazikhiphe nezingane badlale nazo imidlalo ezobakhulisa umqondo njenge ‘team building’ nokubafundisa izindlela zokumelana nezimo eziningi ezingabehlakalele.
I-1st Princess ye-Queen of High Schools uGugu ubejabule kakhulu ukuhlala nalezingane, wabeka nokuthi ukuba kulesis’khundla kumfundise okuningi kanti ubeqala ukuwina loluhlobo lomncintiswano.
“Ngiyazi ukuthi kunjani ukungabi nabazali ngakhoke ngifuna ukubonisa lezi zingane ukuthi noma kunjalo bakhona abazithandayo,” kusho uGugu.
USiyathokoza uchaze leziy’ngae njengabantu abaletha injabulo empilweni yakhe wabeka nokuthi uzifisela impumelelo.
“Lokhu kungikhumbuza amagama aLupita N’yongo athi ‘akunandaba ukuthi uphumaphi kodwa amaphupho akho abalulekile,” kusho iQueen of High Schools.
Bekuwusuku oluhle impela epaki izingane zithole ukudlala ndawonye epaki, amantombazanyana amancane apendwa izinzipho, abantwana bephiwa izimpahla, kudwetshwa izithombe kudlalwa nebhola.